सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय ८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय ८
जब मेरा प्रकाशहरू तिनका उत्कर्षमा पुग्छन्‌, र जब मेरो न्याय अन्त्यतिर आइपुग्छ, तब मेरा सबै मानिसहरू प्रकट हुने र पूर्ण बनाइने समय यो हुनेछ। म मेरो आशयसँग मेल खाने र मेरो प्रयोगको लागि योग्य मानिसहरूको निरन्तर खोजीमा ब्रह्माण्डको सबै कुनाहरूमा यात्रा गर्छु। को माथि उठ्न र मसँग सहकार्य गर्न सक्छ? मानिसहरूले मलाई गर्ने प्रेम सूक्ष्म छ, र ममाथिको तिनीहरूको विश्‍वास पनि दया लाग्दो रूपमा सानो छ। यदि मैले मानिसहरूका कमजोरीहरूमा मेरा वचनहरूको प्रहार निर्देशित गरिनँ भने, तिनीहरूले धाक लगाउँदै र आडम्बरी सिद्धान्तहरूसँगै उठ्दै, घमन्ड र अतिरञ्जन गर्लान्‌, मानौं तिनीहरू नै सांसारिक मामिलाहरूको सवालमा सर्वज्ञानी र सर्वज्ञाता हुन्‌। विगतमा मप्रति “निष्ठावान्‌” हुनेहरूमध्येमा, र आज मेरो सामुन्ने “स्थिर खडा” हुनेहरूमध्येमा, कसले अझै फूर्ति लगाएर बोल्ने आँट गर्छ? को आफ्ना भावी सफलताहरूमा गोप्य रूपमा खुसी हुँदैन र? जब मैले मानिसहरूलाई सीधै पर्दाफास गरिँन, तब तिनीहरू लुक्ने कुनै ठाउँ भएन र सर्मद्वारा उत्पीडित भए। यदि मैले फरक तरिकामा बोलेँ भने, यो अझ कति धेरै भयङ्कर होला? मानिसहरूसँग अझ अधिक कृतज्ञताको भाव होला, कुनै पनि कुराले तिनीहरूलाई निको पार्न सक्दैन भन्ने कुरामा तिनीहरूले विश्‍वास गर्लान्‌, र सबै जना तिनीहरूको निष्क्रियताद्वारा कसिएर बाँधिएका होलान्‌। जब मानिसहरूले आशा गुमाउँछन्‌, तब राज्यको सलामी औपचारिक रूपमा चर्को हुन्छ, जस्तो कि, मानिसहरूले भनेका छन्‌, “त्यस्तो समय जब सात गुणा चर्को आत्माले काम गर्न थाल्छ।” अर्को शब्दमा, यो तब हुन्छ जब राज्यको यो जीवन आधिकारिक रूपमा यस पृथ्वीमा सुरु हुन्छ; यो तब हुन्छ जब मेरो ईश्‍वरत्व सीधै (कुनै मानसिक “प्रक्रिया” बिना) काम गर्न निस्कन्छ। सबै मानिसहरू व्यस्त रूपमा हतारो गर्छन्‌, मानौं तिनीहरू कुनै एउटा सपनाबाट बिउँताइका वा उठाइएका छन्‌, र उठ्दै गर्दा, यस्ता परिस्थितिहरूमा आफैलाई पाएकोमा चकित पर्छन्‌। विगतमा, मैले मण्डली निर्माणको बारेमा धेरै भनेँ; मैले धेरै रहस्यहरू प्रकट गरेँ, तर जब त्यो काम यसको शिखरमा पुग्यो, तब यो एक आकस्मिक अन्त्यमा आइपुग्यो। तथापि, राज्यको निर्माण फरक कुरा हो। जब आत्मिक क्षेत्रको युद्ध यसको अन्तिम चरणमा पुग्छ, तब मात्र म मेरो काम यस पृथ्वीमा नवीन प्रकारले गर्न सुरु गर्छु। भन्नुको मतलब, सबै मानिसहरू पछि हट्ने अवस्थाको सङ्घारमा आइपुग्दा मात्र म औपचारिक रूपमा मेरो नयाँ कार्य थाल्छु र खडा गर्छु। राज्य निर्माण र मण्डली निर्माणबीचको भिन्नता यो हो कि मण्डली निर्माणमा, मैले मानवतामार्फत‌ काम गरेँ जुन ईश्‍वरत्वद्वारा शासित थियो; मैले तिनीहरूको विकृत‌ अवस्थाहरू सीधै प्रकट गर्दै र तिनीहरूको सारको पर्दाफास गर्दै मानिसको पुरानो प्रकृतिमा प्रत्यक्ष काम गरेँ। परिणाम स्वरूप, यही आधारमा तिनीहरूले आफैलाई चिन्न पाए, र त्यसैले आफ्ना हृदयहरूमा र आफ्ना वचनहरूमा सुनिश्चित भए। राज्य निर्माणमा, म सीधै मेरो ईश्‍वरत्वमार्फत काम गर्छु, र अन्ततः वचन देहधारी हुन आएको सन्दर्भमा मेरो बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्ने मौका दिँदै मसँग के छ र मेरा वचनहरूको ज्ञानको जगमा म को हुँ भन्ने कुरा सबै मानिसहरूलाई बुझ्ने मौका प्रदान गर्छु। यसरी सबै मानव जातिले गरेको अस्पष्ट परमेश्‍वरको खोजी समाप्त हुन्छ, र यसरी तिनीहरूले स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्‍वरको लागि आफ्ना हृदयहरूमा ठाउँ राख्न छोड्छन्‌; भन्नुको मतलब, म देहधारी हुँदाखेरि मैले गर्ने कार्य मानव जातिलाई बुझ्न दिन्छु, र यसरी पृथ्वीमा मेरो समयलाई टुङ्ग्याउँछु।
राज्यको निर्माण सीधै आत्मिक क्षेत्रमा लक्षित छ। भन्नुको मतलब‌, आत्मिक क्षेत्रको युद्धको अवस्थालाई सबै मेरा मानिसहरूको माझमा प्रस्ट गरिएको छ, र मण्डलीभित्र मात्र होइन, तर राज्यको युगमा अझ धेरै, हरेक व्यक्ति नै नित्य युद्धमा छ भन्ने कुरा देखाउन यो पर्याप्त छ। तिनीहरूका पार्थिव शरीरहरूको बाबजुत पनि, यो आत्मिक क्षेत्र सीधै प्रकट गरिन्छ, र तिनीहरू यस आत्मिक क्षेत्रको जीवनसँगको संसर्गमा आउँछन्‌। यसरी, जब तिमीहरू विश्‍वासयोग्य हुन सुरु गर्छौं, तब तिमीहरूले मेरो कामको अर्को भागको निम्ति ठीक प्रकारले तयारी गर्नुपर्छ। तिमीहरूले आफ्नो हृदयको सम्पूर्णता नै त्याग्नुपर्छ; अनि मात्र तिमीहरूले मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छौ। मण्डलीमा अगाडि के भयो सोबारे म केही मतलब राख्दिनँ; आज, यो यही राज्यमा छ। मेरो योजनामा, शैतानले, अहिलेसम्म नै, पाइलैपिच्छे पछ्याउँदै आएको छ र, मेरो बुद्धिको प्रतिभारको रूपमा, मेरो मौलिक योजनालाई अवरोध शैलीहरू र माध्यमहरू पत्ता लगाउने कोसिस गर्दै आएको छ। तापनि के म त्यसका छली युक्तिहरूमा फस्न सकुँला र? स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि हरेक थोकले मेरो सेवा गर्छ; के शैतानका छली युक्तिहरू केही फरक हुन सक्लान्‌ र? ठीक यहाँनेर नै मेरो बुद्धिले प्रतिछेदन गर्छ; मेरा कार्यहरूको बारेमा भएको आश्चर्य ठीक यही नै हो, र मेरो सारा व्यवस्थापन योजनाको सञ्चालनको सिद्धान्त नै यही हो। राज्य निर्माणको युगको समयमा, अझै पनि म शैतानको छली युक्तिहरूलाई पन्छ्याउँदिन, तर मैले गर्नैपर्ने कार्यलाई जारी राख्छु। ब्रह्माण्ड र सारा थोकहरूको माझमा, मैले शैतानका कार्यहरूलाई मेरो प्रतिभारको रूपमा छानेको छु। के यो मेरो बुद्धिको प्रदर्शन होइन र? मेरो कार्यको बारेमा रहेको आश्चर्य नै ठीक यही होइन र? राज्यको युगभित्र प्रवेश गर्ने अवसरमा, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका सबै थोकहरू पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुन्छन्‌, र तिनले उत्सव र आनन्द मनाउँछन्‌। के तिमीहरू केही फरक छौ? कसको हृदयमा महको मिठास छैन? को आनन्दले भरिएर छताछुल्ल भएको छैन? को उल्लासले नाच्दैन? कसले प्रशंसाका शब्दहरू उच्चारण गर्दैन?
मैले माथि चर्चा र छलफल गरेका कुराहरू सबैका लक्ष्यहरू र उत्पत्ति तिमीहरू बुझ्छौ, वा बुझ्दैनौ? यदि मैले यो नसोधेको भए, मैले केवल बकबक गर्दै थिएँ भन्ने अधिकांश मानिसहरूले विश्‍वास गर्थे होलान्‌, र मेरा वचनहरूको स्रोतलाई नाप्न असक्षम हुन्थे होलान्‌। यदि तिमीहरूले तिनलाई ध्यान दिएर विचार गर्छौ भने, तिमीहरूले तिनको महत्त्वको बारेमा बुझ्नेछौ। तैंले तिनलाई नजिकबाट पढ्नु बेस हुन्थ्यो: मेरा वचनहरूमध्ये कुन तेरो लागि लाभदायक छैन? कुनले तेरो जीवन वृद्धि गर्ने आशय राख्दैन? कुनले आत्मिक क्षेत्रको यथार्थको बारेमा बोल्दैन? मेरा वचनहरूमा अनुप्रास वा तर्क छैन, कि तिनमा व्याख्या र अर्थ खोलाइको अभाव छ भनी अधिकांश मानिसहरू विश्‍वास गर्छन्‌। के मेरा वचनहरू साँच्चै यति अमूर्त र अभेद्य छन्‌? के तिमीहरू साँच्चै मेरा वचनहरूप्रति समर्पित छौ? के तिमीहरू साँच्चै मेरा वचनहरू स्विकार गर्छौ? के तिमीहरूले तिनलाई खेलौनाको रूपमा व्यवहार गर्दैनौ? के तैंले तिनलाई तेरो आफ्नो कुरूपतालाई ढाक्ने कपडाको रूपमा प्रयोग गर्दैनस्‌? यस विशाल संसारमा, को मद्वारा व्यक्तिगत रूपमा जाँच गरिएको छ? कसले व्यक्तिगत रूपमा मेरो आत्माका वचनहरू सुनेको छ? धेरै मानिसहरू छामछुम गर्छन्‌ र अन्धकारमा खोज्छन्‌; धेरैले आपदको बीचमा प्रार्थना गर्छन्‌; भोका र कठ्याङ्ग्रिएका धेरैले आशामा हेर्छन्‌; र धेरै शैतानद्वारा बन्धित छन्‌; तापनि धेरैलाई कहाँ फर्कने थाहा छैन, धेरैले आफ्नो खुसीको बीचमा मलाई त्याग्छन्‌, धेरै अकृतज्ञ छन्‌, र धेरै शैतानको छली युक्तिहरूप्रति निष्ठावान्‌ छन्‌। तिमीहरूमध्येमा अय्यूब को हो? पत्रुस को हो? किन मैले अय्यूबलाई बारम्बार उल्लेख गरेको छु? किन मैले पत्रुसलाई यति धेरै पटक जनाएको छु? के तिमीहरूले तिमीहरूको लागि मेरा आशाहरू के हुन्‌ भनी कहिल्यै निश्चित गरेका छौ? तिमीहरूले यस्ता कुराहरूमा मनन‌ गर्न अधिक समय खर्च गर्नुपर्छ।
फेब्रुअरी २९, १९९२
अघिल्लो: सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय ६
अर्को: सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय १०